रातमा निन्द्रा लागेन ? यसो गर्नुस् ! « Kathmandu Pati
रातमा निन्द्रा लागेन ? यसो गर्नुस् !
प्रकाशित मिति : २०७७, ३० असार मंगलवार १२:०२
काठमाडौं – पछिल्लो समय अधिकांश मानिसहरुमा निन्द्रा नलाग्ने समस्या हुने गर्दछ । कामको चाप र विभिन्न प्रकारका तनावका कारण थुप्रै मानिसहरुमा रातमा निन्द्रा नलाग्ने समस्या भएको पाइन्छ । कतिपयलाई त निन्द्रा नलागेकै कारण विभिन्न समस्याहरु देखा पर्छन् ।
स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले ६ देखि ८ घण्टाभन्दा कम सुत्ने व्यक्तिहरुमा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरु पैदा हुने गर्छ । कम निन्द्राका कारण रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमि आउने, पाचन प्रक्रिया गडबढ हुने, मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने, डिप्रेशन, तौल बढ्ने जस्ता समस्याहरु हुने गर्छन् ।
यस्ता छन् निन्द्रा नलाग्ने समस्याबाट छुटकारा पाउने उपायः
धेरैवटा अनुसन्धानले दैनिक व्यायाम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । दैनिक व्यायामले मिठो निन्द्रा दिलाउँछ भने निन्द्राको राम्रो रुटिन पनि बनाउन मद्दत गर्छ ।
साँझ र दिउँसोमा नसुत्ने
दिनको समयमा १० देखि १५ मिनेट न्याप लिनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसले थप उर्जा प्रदान गर्छ । तर दिनभर सुत्ने गरेमा रातमा निन्द्रा पर्दैन । त्यस्तै दिनभर काम गरेर थाकेपछि धेरैजसोले साँझमा ‘पावर न्याप’ लिने गर्दछन् । तर यसो गर्दा रातको निन्द्रालाई असर गर्छ ।
छिटो तर थोरै खाना खाने बानी बसाल्नुपर्छ । रातमा मिठो निन्द्राको लागि रातिको खाना छिट्टै खानुपर्छ । साथै रातिको खाना कम खाने गर्नुपर्छ । रातमा धेरै खाँदा एसिडिटी, पेट फुल्ने र अन्य समस्याहरु हुने गर्छ र रातको निन्द्रा खटपट हुनसक्छ ।
मिठो निन्द्राको लागि म्याग्नेसियमयुक्त खाना खाने गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सागपात, फर्सीको बियाँ, बदाम र सूर्यमुखी फूलको दाना जस्ता खानेकुरा रातिको खानामा सामेल गर्नुपर्छ ।
ग्याजेट्सबाट टाढा रहनुहोस्
ग्याजेट्सबाट निस्किने ब्लू लाइटले मेलाटोनिन नामक हर्मोन उत्पादन गर्ने गर्छ जसले निन्द्रा नआउने समस्या हुनसक्छ । त्यसैले सुत्नुभन्दा दुई घण्टा अगाडि मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर जस्ता सामानहरुको प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
पसिना निकालेर सुत्न जानुहोस्
सुत्नुअघि शरिर पुरै थाकेको छ भने सहजै निन्द्रा लाग्न सक्छ । काम गरेर थाक्नु भएको छ भने यत्तिकै सुत्नुहोस् अन्यथा केही गरेर शरिरमा पसिना निकालेर सुत्नुहोस्, निन्द्रा सहजै लाग्न सक्छ ।
रजोनीवृत्तिले मेटाबोलिक सिन्ड्रोमको जोखिम
एजेन्सी – रजोनीवृत्ति भएको बेला, महिलाहरुमा मेटाबोलिक सिन्ड्रोमको जोखिम बढी
स्वाब संकलन गर्न सरकारले तोक्यो उपत्यकाका १४ अस्पताल, कुन–कुन परे…
काठमाण्डु – कोरोना भाइरस संक्रमणको शंकास्पद बिरामीका लागि स्वाब संकलन
क्रिस्टियानो रोनाल्डोले किने विश्वकै महंगो कार
एजेन्सी – युभेन्टसका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले विश्वकै महंगो कार खरिद
नेपालमा पहिलोपटक प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना संक्रमितको उपचार
काठमाण्डु – नेपालमा पहिलोपटक प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना संक्रमितको उपचार सुरु